Umahluko phakathi kwemozulu kunye nemozulu: iimpawu kunye nezinto ezinomdla | I-Network Meteorology
Umahluko phakathi kwemozulu kunye nemozulu
IsiJamani sasePortillo | 16/06/2022 11:05 | Zemozulu
Kokubini kwimihla yethu yemihla kunye nakumajelo osasazo ahlukeneyo, sithetha ngemozulu kunye nemozulu. Abantu abaninzi bayayibhidanisa le migaqo kwaye abazi ukuba yintoni kanye kanye umahluko phakathi kwemozulu nemozulu.
Ngenxa yesi sizathu, siya kuzinikela eli nqaku ukukuxelela ukuba yeyiphi na umehluko omkhulu phakathi kwemozulu kunye nemozulu ekhoyo kunye neempawu zomnye wabo.
1 Umahluko phakathi kwemozulu kunye nemozulu
2 Izinto zemozulu
3 Izinto eziphawula umahluko phakathi kwemozulu nemozulu
4 ithini imozulu
5 Izixhobo zemozulu zokulinganisa imozulu
6 ukuguquguquka kwemozulu
Nangona iingqikelelo zabo zisondele, amagama athi imozulu kunye nemozulu akanakusetyenziswa ngokungafaniyo. Kukho umahluko osisiseko owahlula kwaye uyahlula: ixesha eliphakathi.
Xa sithetha ngemozulu, sibhekisela kwiimeko ze-atmospheric ezifana nobushushu, ukufuma okanye uxinzelelo kwindawo ethile kunye nexesha elifutshane. Oko kukuthi, xa sibona uqikelelo lwemozulu, kuthethwa ngemozulu, kungekhona imozulu.
Imozulu, kwelinye icala, ibhekisa kuwo onke la maxabiso afanayo omoya, kodwa i-avareji kwixesha elide kwindawo enye. Yingakho, xa kuziwa kwinguqu yemozulu, umzekelo, ithatha ingqalelo kwiirekhodi kunye neenkcukacha eziqokelelwe kwiminyaka.
Njengoko besitshilo, sinokuyichaza imozulu njengezibalo zemozulu zexesha elide, ngokuqhelekileyo iminyaka engama-30. Ukulinganisa imozulu, kufuneka sijonge utshintsho kwizinto zayo, esizidwelisa ngezantsi. Inkqubo yemozulu yendawo enikeziweyo inqunywe ngamacandelo ayo amahlanu. Amalungu emozulu ngala:
Imozulu ikwachatshazelwa zizinto ezahlukahlukeneyo ezikuyo, njengokuma komhlaba okanye uhlaza.
Kukho izinto ezintlanu ezenza imozulu:
Ubushushu bomoya: Njengoko igama lisitsho, yindlela oshushu ngayo okanye obandayo ngayo umoya ngexesha elithile nangexesha elithile. Oku kuphenjelelwa ikakhulu yimitha yelanga, eya kuyenza ibe phezulu okanye ibephantsi ngokuxhomekeke kwiplanethi nakwijografi. Ubushushu be-atmospheric kunye nemvula zizinto ezimbini ezibalulekileyo zemozulu.
Imvula: Kubandakanya naluphi na uhlobo lwamanzi asuka emafini akwiatmosfera awela kumphezulu woMhlaba. Imvula, ikhephu nesichotho ziindlela zemvula.
Uxinzelelo lomoya: Bubunzima obukhutshwa bubunzima bomoya macala onke. Ukuphakama komphakamo, kokukhona obu bunzima buya kuba buncinci ngenxa yokuba kukho umoya omncinci ngaphezu kwethu. Iqondo lobushushu likwabangela ukuba umoya wande kwaye uphulukane noxinaniso, ngokomphakamo, okukhona iqondo lobushushu liphezulu, kokukhona uxinzelelo lusezantsi.
Umoya: Kukuhamba komoya emoyeni.
Ukufuma: Okokugqibela, enye yezinto eziyinxalenye yemozulu kukufuma kweatmospheric, nto leyo eyisixa samanzi akwiatmosfera ngendlela yomphunga.
Ukuguquka kwamanzi: Inkqubo ebonakalayo apho amanzi atshintsha ukusuka kulwelo ukuya kwirhasi.
Cloud Cover: Imalunga namafu kunye nobungakanani bala mafu emoyeni.
Izinto eziphawula umahluko phakathi kwemozulu nemozulu
Kukho imiba emi-6 ephambili yemozulu:
Ubude: ngumgama we-angular phakathi kwendawo enikiweyo kunye ne-ikhweyitha yoMhlaba. Oku kuchaphazela i-angle yeziganeko zemitha yelanga, echaphazela ukuqina kokufudumeza kwindawo kunye nobude bemini nobusuku.
Ukuphakama: ngumgama othe nkqo phakathi kwendawo ethile kunye nomphakamo wolwandle. Oku kunempembelelo enkulu kwimozulu, njengoko ukuphakama okuphezulu kuhlala kuthetha amaqondo aphantsi kunye noxinzelelo oluphantsi. Umgangatho we-thermal unikezwa ngokuphakama.
Umgama ukusuka elwandle: Oku kubalulekile ngenxa yempembelelo yamanzi amaninzi kunye nokukwazi kwabo ukugcina ubushushu ixesha elide kunemigangatho yelizwekazi. Imimandla ekude nolwandle ine-amplitudes ephezulu ye-thermal ngenxa yokuba ayinayo impembelelo yokugudisa yolwandle.
I-Ocean Currents: Zithwala amanzi amaninzi ukusuka kwiindawo ezishushu okanye ezingaphantsi, ngoko zisebenza njengemibhobho okanye iinxalenye zeradiyetha okanye ifriji.
Ukuqhelaniswa neTopographic: Phawula ukuba indawo inelanga okanye inomthunzi nokuba ifumana kangakanani imitha yelanga.
Isalathiso somoya weplanethi kunye nemimoya yamaxesha onyaka: Xa sithetha ngezinto zemozulu, sikhankanya umoya, onomsebenzi ofanayo kunye nemisinga yolwandle, ukuhambisa umthamo omkhulu womoya, kunye namaqondo okushisa ahlukeneyo kunye neziphepho okanye ezinye iimpembelelo.
Imozulu ibhekisa kwimo yazo zonke ezi zinto zisesibhakabhakeni kwindawo nexesha elithile. Siza kubona ukuba xa sikhankanya ukuba imvula izakuna ngomso okanye izakuba nelanga okanye bekubanda kakhulu kule veki iphelileyo. Yiyo loo nto siyibona kuqikelelo lwemozulu okanye kuqikelelo lwemozulu.
Ixesha lifundwe nzulu ukususela kwixesha elidlulileyo, ngokuchanekileyo kuba okukhona sisazi ngcono, kokukhona sisazi ngokuchanekileyo ngakumbi imozulu kwaye, ngoko ke, zininzi izixhobo esinazo zokuyixela kwangaphambili. Ukukwazi ukuqikelela imozulu bekusoloko kubaluleke kakhulu ebantwini. Ukususela kwisicelo sakho sezolimo esisisiseko, ukuya kulungiselelo lwesicwangciso, uhambo okanye umcimbi.
Izixhobo zemozulu zokulinganisa imozulu
Ukugqibezela ukuqonda kwethu umahluko phakathi kwemozulu nemozulu, kufuneka sitsho nje kancinci malunga nomva. Kukwabalulekile ukwazi ngezixhobo zemozulu ezilinganisa ixesha kwaye zenze uqikelelo lwemozulu okanye lwemozulu:
Ithemometha: Ivumela ukulinganisa ubushushu be-atmospheric yendawo ngexesha elithile. Yile ndlela aziwa ngayo obona bushushu buphezulu, buphakathi kunye nobuncinci bendawo.
IBarometer: Ukulinganisa uxinzelelo lomoya.
I-Anemometer: Ukulinganisa isantya somoya.
IPluviometer: Ilinganisa imvula, isichotho kunye nokuwa kwekhephu.
Vane: Isinceda sazi icala oya ngakulo umoya.
Imozulu kunye nemozulu ngamagama asetyenziswa ngokutshintshanayo ukunxibelelana nemeko yangoku okanye yangoku yeatmosfera ngomlinganiselo weeyure ukuya kwiintsuku. Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, ngelixa (imozulu) imozulu ibhekiselele kwimeko yangoku yeatmosfera, Imozulu ibhekiselele kutshintsho kwisithuba seminyaka engamashumi amathathu nangaphezulu.
Ukuguquguquka kwemozulu kubhekiselele kutshintsho kwimeko yemozulu kunye nezinye iinkcukacha-manani kuzo zonke izikali zexeshana nezesithuba, ngaphaya kwezehlo zemozulu ezizimeleyo, ezenzeka ngamaxesha ahlukeneyo ukuya kumlinganiselo wemozulu.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nomahluko phakathi kwemozulu kunye nemozulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Meteorology yenethiwekhi » Zemozulu » Umahluko phakathi kwemozulu kunye nemozulu
Iintaba-mlilo eziyingozi kakhulu emhlabeni